Global Voices teny Malagasy » Tolona Hisian’ny Fahalalahana Ety Anaty Aterineto Ao Meksika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jolay 2014 16:19 GMT 1	 · Mpanoratra Jacobo Nájera Nandika (en) i Gabriela Garcia Calderon, imanoela fifaliana
Sokajy: Meksika, Fanentanana, Fiainana Manokana, Fitsipika, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
Miady amin'ny lalana momba ny fifandraisan-davitra natolotry ny Filoha Enrique Peña Nieto ny vahoaka Meksikana ary vao tsy ela akory mialohan'ny Antenimiera. Mety hitondra loza mitatao ho an'ny zon'olombelona aty anaty aterineto ity tolo-dalana ity: mandika ny tsy fombàna ny atsy na ny aroa izany,  manome alàlana ny sivana sy ny fanakànana votoaty, sy mangataka ireo mpanome tolotra aterineto mba hanangona sy hitahiry ny rakitra manokan'ireo mpampiasa amin'ny ambaratonga midadasika kokoa.
Ny Libre Internet Para Todos  (Aterineto Malalaka ho an'ny Rehetra), vondrona iray mpandala ny maha olona ao Meksiko, dia manambara fa “miato” hatramin'ny volana Jolay ny fandraisana andraikitr'ireo mpanao lalàna. Izany no vokatry ny tsy fahampian'ny fifanarahana teo amin'ireo kaomity miandraikitra ny fandinihana ny lalàna tamin'ny lohataona lasa.
Raha raisina izay hita momba ity tolo-dalana ity sy ny mety hahatafidiran'izany ao amin'ny lalam-panorenana Meksikana, dia nanatanteraka hetsi-panoherana isan-karazany tety anaty aterineto sy teny an-dalambe ireo vahoaka Meksikana. Ny volana Aprily, nisy olona nanao tohivakana (#NoMásPoderAlPoder ) nanavatsava nanerana ny tanàn-dehiben'i Meksiko, niainga teo amin'ny tranon'ny Filoham-pirenena izany ka hatrany amin'ny Televisa Chapultec, foibem-pandefasana fahitalavitra lehibe indrindra ao Meksiko.
Vondrona mafana fo maromaro no nanome tolo-dalana momba ny teknolojia sy taratasy iray misy ny fanohanana iraisam-pirenena  — fiaraha-mientana izay nahitàna an'i Vía Libre, EFF, Richard Stallman, Cory Doctorow, Nighat Dad ary Richard Sennett.
Nanome olo-dalanà iray ara-teknika  ho fidiana ny ContingenteMX amin'ny fanoratana ity lalana ity, izay manantitrantitra ny fiarovana ny zon'olombelona, ary nahitàna fa ny zon'olombelona no tena ifantohany ary hiantohana ny tsy fombana ny atsy na ny aroa, ny fiainana manokana ety amin'ny aterineto ary ny tsy fihazonana ny rakitra manokan'ny olona. Ireo rehetra ireo anefa dia fitakiana efa neken'ireo fikambanana iraisam-pirenena toa ny Electronic Frontier Foundation,  hatramin'ny fanehoankevitra navoakan'ny Network Defense of Human Digital Rights na ny Tambajotra Miaro ny Zon'olombelona ety amin'ny Aterineto mba hisian'ny fanitsiana  ilay lalàna. 
Araho ireo adihevitra sy ireo zava-misy maro ao amin'ny Libre Internet Para Todos , ContingentenMX , Libre Internet MX , DefenderInternet  .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/05/61108/
 mandika ny tsy fombàna ny atsy na ny aroa izany,: http://contingentemx.net/2014/04/01/leytelecom-pone-en-riesgo-el-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-internet
 taratasy iray misy ny fanohanana iraisam-pirenena: http://defenderinternet.org/
 olo-dalanà iray ara-teknika: http://defenderinternet.org/data/uploads/propuesta-tecnica-resumen-contingentemx-defenderinternet-leytelecom.pdf
 Electronic Frontier Foundation,: https://www.eff.org/deeplinks/2014/05/proposed-mexican-telecom-law-would-be-disaster-internet-freedom
 fanitsiana: https://mg.globalvoices.orgasí como también la Red en Defensa de los Derechos Digitales hemitió comentarios de propuestade modificación a la iniciativa de ley.